မြန်မာ့အလှတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ”စက်စက်ယို”ဆိုတဲ့ရွာလေးကို သွားရောက်အလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း……. – Cele Oscar
မြန်မာ့အလှတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ”စက်စက်ယို”ဆိုတဲ့ရွာလေးကို သွားရောက်အလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း…….
March 12, 2022 By L YC Knowledge
ပရိသတျကွီး​ရေ နနျးစန်ဒာလှထှနျး ကတော့ MRTV -4 မှာ ပွသခဲ့တဲ့ ” ပဉ်စလကျရှာ”ဇာတျလမျးတှဲမှာ ရဝေတီဆိုတဲ့ ကာရိုကျတာလေးနဲ့ ပရိသတျရငျထဲ အရငျဆုံးရောကျရှိခဲ့ သူလေးပါ။ ပရိသတျတှေ တခဲနကျအားပေးခဲ့ရတဲ့ အရိပျဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး နာဈ့မဆရာမလေး ”သကျသကျ”အနနေဲ့ ပုရိသပရိသတျတှေ တဖွုတျဖွုတျ ကွှခေဲ့ရသူလေးပါ။
နနျးစန်ဒာလှထှနျး ကတော့ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတှဲ တိုငျးမှာလညျး အပီပွငျဆုံး သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲ မငျးသမီးစဈစဈ တဈလကျဖွဈတာကွောငျ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ နဲ့ ဝါရငျ့ အနုပညာရှငျတှကေ တောငျခြီးကြုးရတဲ့ အထိပါပဲနျော။ဒါ့အပွငျ စီနီယာအနုပညာမောငျနှမတှေ အပျေါ ရိုသလေေးစားကာ အမွဲရငျးနှီဖျောရှတေတျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပါ။
လကျရှိမှာလညျး” ပီတိဖွဈရတဲ့ အလှူလေး 😇🙏ဆံရဈဝိုငျးလေးတှေ ရှိတဲ့နရော .. တနညျးအားဖွငျ့ “ ရဝေတီ “ ကိုမှေးဖှားပေးခဲ့တဲ့ရှာလေး … “စကျစကျယို”တဲ့ ကိုယျအညာဘကျရောကျတိုငျး ရောကျဖွဈတဲ့ရှာလေးပေါ့ .. “ ရောကျတိုငျး လညျး အလှူလေးလုပျဖွဈတယျ .. ဒီတဈခေါကျတော့ ရှာကမုနျ့ဟငျးခါးလေးရော လှမျးနတော နဲ့ ရောရှာ လုံးကြှတျမုနျ့ဟငျးခါး ဒါနပွုခဲ့တယျ .. ဒီကောငျးမူကွောငျ့ ဒီထကျမက လှူဒါနျးနိုငျရပါ လို၏ 🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အလှူပွုလုပျခဲ့ကွောငျး ဝမြှေခဲ့တာပါ။ ပရိသတျတှေ လညျး ရဝေတီလေး ရဲ့ အလှူလေးကို သာဓုချေါခဲ့ကွပါဦးနျော။
ပရိသတ်ကြီး​ရေ နန်းစန္ဒာလှထွန်း ကတော့ MRTV -4 မှာ ပြသခဲ့တဲ့ ” ပဉ္စလက်ရွာ”ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ရေဝတီဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာလေးနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲ အရင်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့ သူလေးပါ။ ပရိသတ်တွေ တခဲနက်အားပေးခဲ့ရတဲ့ အရိပ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း နာစ့်မဆရာမလေး ”သက်သက်”အနေနဲ့ ပုရိသပရိသတ်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေခဲ့ရသူလေးပါ။
နန်းစန္ဒာလှထွန်း ကတော့ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တိုင်းမှာလည်း အပီပြင်ဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ မင်းသမီးစစ်စစ် တစ်လက်ဖြစ်တာကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ နဲ့ ဝါရင့် အနုပညာရှင်တွေက တောင်ချီးကျုးရတဲ့ အထိပါပဲနော်။ဒါ့အပြင် စီနီယာအနုပညာမောင်နှမတွေ အပေါ် ရိုသေလေးစားကာ အမြဲရင်းနှီဖော်ရွေတတ်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါ။
လက်ရှိမှာလည်း” ပီတိဖြစ်ရတဲ့ အလှူလေး 😇🙏ဆံရစ်ဝိုင်းလေးတွေ ရှိတဲ့နေရာ .. တနည်းအားဖြင့် “ ရေဝတီ “ ကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ရွာလေး … “စက်စက်ယို”တဲ့ ကိုယ်အညာဘက်ရောက်တိုင်း ရောက်ဖြစ်တဲ့ရွာလေးပေါ့ .. “ ရောက်တိုင်း လည်း အလှူလေးလုပ်ဖြစ်တယ် .. ဒီတစ်ခေါက်တော့ ရွာကမုန့်ဟင်းခါးလေးရော လွမ်းနေတာ နဲ့ ရောရွာ လုံးကျွတ်မုန့်ဟင်းခါး ဒါနပြုခဲ့တယ် .. ဒီကောင်းမူကြောင့် ဒီထက်မက လှူဒါန်းနိုင်ရပါ လို၏ 🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အလှူပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝေမျှခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေ လည်း ရေဝတီလေး ရဲ့ အလှူလေးကို သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးနော်။
ဦးဖိုးဖြူ ရဲ့ ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးလို့ဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း…….